शी*घ्र स्ख*लन कसरी कम गर्ने ? यस्ता छन् ७ तरिका – ताजा समाचार
शी*घ्र स्ख*लन कसरी कम गर्ने ? यस्ता छन् ७ तरिका
के तपाईं शी*घ्र स्ख*लनका कारण मा*नसिक तना*वमा त हुनुहुन्न ? यदि हुनुहुन्छ भने अब यस्तो उपाय अपनाउनुस् र रोक्नुस् शी*घ्र स्ख*लन । यौ*नसम्बन्धी समस्याहरूमध्ये सबैभन्दा बढी हुने समस्या शी*घ्र स्ख*लन हो । शी*घ्र स्ख*लन हुनुको कारण प्रायः जसो शारीरि*कभन्दा पनि बढी मा*नसिक समस्या रहेको पाइन्छ। शी*घ्र स्ख*लनको समस्यालाई यसरी कम गर्न के गर्न सकिन्छ :
१. हस्त*मैथुन गर्ने
हस्त*मैथुन गर्ने र वी*र्य स्ख*लन होला जस्तो भएपछि रोक्ने र उत्ते*जना केही कम भएपछि पुनः हस्त*मैथुन सुरु गर्ने र वी*र्य स्ख*लन होलाजस्तो रोक्ने र यो प्रक्रिया दोहार्‍याउने ।
२. चि*न्ता कम गर्ने
कतिपय मानिसमा यौ*न सम्प*र्क वा क्रियाक*लापमा ुराम्रोु गर्न सक्दिन किन भन्ने गम्भीर चिन्ता हुनसक्छ। आफ्नो यौ*न जोडीलाई खुशी पार्ने लोभले चिन्ता*बढाउछ र यसले नै झन बढी सम*स्याकोसिर्जना गर्न पनि सक्छ। शी*घ्र स्ख*लनको सम*स्यालाई कम गर्न सबैभन्दा पहिले चि*न्ताबाट छुटकारा पाउनु पर्छ ।
३.यौ*नसम्पर्क गर्दा बेला बेलामा रोक्ने
जब शी*घ्र स्ख*लन होला जस्तो लाग्छ आफ्नो मन अन्तैतिर लगेर यौ*न क्रि*डालाई नै रोक्ने र यौ*न उत्ते*जना केही कम भएपछि फेरि यौ*न क्रि*या शुरु गर्ने । यसो गर्दा लामो समयसम्म यौ*न क्रि*डा गर्न सकिन्छ । यस्तो क्रि*या गर्न अभ्यास पर्ने हुन्छ । तेस्तो अभ्यास यौ*न जोडीसँग सम्पर्क गर्दाभन्दा हस्त*मैथुन गर्दा सजिलोहुन्छ । कतिपय पुरुषलाई यौ*न उत्ते*जनामा लिं*गलाई यो*नीबाट बाहिर झिकेर यौ*न क्रि*या रोक्न गाह्रो हुन्छ भने हस्त*मैथुन गर्दा भने हात एक छिन रोक्न सजिलो हुन्छ ।
४. लिं*ग*को फे*दमा समात्ने
यौ*न क्रिया गर्दा शी*घ्र स्ख*लन हुन लागेमालिं*ग यो*नीबाट बाहिर झिकेर लिं*गको फेदमा बेस्सरी अठ्या*उने र शी*घ्र स्ख*लन हुन नदिने। यसरी शी*घ्र स्ख*लन रोकेर यौ*न उत्ते*जना केही कम भएपछि फेरि यौ*नक्रि*डा सुरु गर्ने।
५.आ*शन परिवर्तन गर्ने
यौ*न क्रि*डा गर्दा महिलामाथि पुरुष तल सु*तेर यौ*न क्रि*डा गर्दा पनि शी*घ्रस्ख*लन कम भइ लामो समयसम्म यौ*न क्रि*डा गर्न सकिन्छ ।
६. कन्ड*मको प्रयोग
क*न्डमले पनि कतिपय पुरुषलाई शी*घ्र स्ख*लनको समस्या कम गर्छ। यो*नी र लिं*गको बीचमा बस्ने क*न्डमले पुरुषमा उत्तेजना कम गरेर लामो समय सम्म यौ*न सम्प*र्क गर्न सहयोग गर्छ ।
७. मांसपेशीको कसरत
पिसाब रोक्न जुन मांसपेशी प्रयोग हुन्छ सोही मांसपेशीले वी*र्य स्खलन रोक्न पनि सहयोग गर्छ। त्यसैले बेला बेलामा यो मांस*पेशीको कसरत गरे पनि शीघ्र*स्खलन कम गर्न सहयोग पुग्दछ। यी सबै उपायहरु हस्त*मैथुन गर्दै प्रयोग गर्ने र वी*र्य स्ख*लन हुन लाग्दा रोक्ने गर्दै प्रयोग गरेर लामो समयसम्म वी*र्य स्खल*नलाई नियन्त्रण गर्न सकेपछि यौ*न साथीसँग प्रयोग गर्नु पर्दछ। अझ आफ्नो यौ*न साथीलाई पनि शी*घ्र स्ख*लन ढिलो गर्न सहयोग गर्न भनेमा यौ*न क्रि*डामा अझ रमाइलो र आरामदायी अनुभव लिन सकिन्छ ।
अन्तिम पटक अपडेट गरिएको : September 24th, 2019,